Edeelarị Snapdragon 865: gịnị ka ọ ga-enye? | Gam akporosis
Edeelarị Snapdragon 865: gịnị ka ọ ga-enye?
Qualcomm esesịn mara ọkwa ya kacha ike processor ka ụbọchị, nke a dị ka onye nọchiri ndị Snapdragon 855 y 855 Plus. Chipset anyị na-ekwu maka ya bụ Snapdragon 865, Doro anya!
Ihe nhazi ohuru a enweela ubochi nke ulo oru ya, obu ezie na obughi ihe obula. Na mbido 2020, ọ ga - abụ onye isi na ekwentị izizi na ahịa.
Ihe niile banyere Qualcomm Snapdragon 865
Nke mbu, ekwesiri ighota na Snapdragon 865 bụ chipset nke na-esiteghị na nkwado maka 5G. Ndị na-emepụta ihe chọrọ ka smartphones ha nwere chipset na nkwado maka netwọkụ 5G, ga-azụkwa Snapdragon X55, nke bụ modem nke 5G nke modual Qualcomm. Na mgbakwunye na nke a, ụlọ ọrụ America ga-achọ ka OEMs zụtakwa modem ahụ, nke mere na ekwentị niile na onye nhazi a na-eweta ndakọrịta na netwọk 5G na-enweghị ihe ọ bụla, nke mere ka ọ bụrụ azịza pụrụ iche maka arụmọrụ 5G dị elu.
Ekpughewo na ọ nwere Kyro 585 cores nke na-anọchite anya mmụba 25% na ọsọ na arụmọrụ ike, karịa Snapdragon 855, wee daa ya n'ime usoro ụyọkọ ndị na-esonụ:
Cortex-A77: 2,84 GHz isi CPU + 3 x 2,4 GHz arụmọrụ CPU.
Cortex-A55: 4 x CPUs raara nye 1,8 GHz arụmọrụ.
GPU nke etinyere na SoC bụ Adreno 650, nke na-anọchitekwa ịrị elu 25% ọsọ ọsọ karịa ọgbọ ndị gara aga, yana mmụba 35% na arụmọrụ ume. A ga-agbakwunye atụmatụ ndị a dị ka Egwuregwu Egwuregwu, na-elekwasị anya n'ịmezi ogo dị mma na inye nnukwu ọgwụ nke mejupụtara ọdịnaya. A na-agbakwunye nkwado maka HDR na HDR10 + na egwuregwu maka ngosipụta ruo 144 Hz ume ọhụrụ. Nhazi ahụ nke na - enyere aka karịa egwuregwu na ike ihe bụ Hexagon 698.
ISP anyị na-ahụ n'ọgbọ ọhụụ a bụ Spectra 480 ISP. Ọ na-enye nkwado maka ndekọ na 4K HDR, 8K ma ọ bụ foto ruru 200 megapixels. Nke a, n'aka nke ya, agaghị anọchite anya oriri ike dị egwu, ebe ọ bụ na arụmọrụ nke chipset na ngalaba a dị oke elu, yabụ agaghị enwe oke oke ọkụ ma ọ bụ ihe ọghọm ndị ọzọ n'ihi ọrụ ya. Na mgbakwunye, a ga-enwekwa nkwado maka ndekọ ngwa ngwa (ngwa ngwa) na 960 okpokolo agba kwa nke abụọ na mkpebi dị elu na ndekọ HDR na Dolby Vision dị njikere ịhụ na nnukwu ákwà.
N'ezie, dịka onye bu ya ụzọ, Snapdragon 865 nwekwara ike inye nkwado maka HDR10 +, vidiyo 4K HDR na ọnọdụ eserese, yana ISP nwere ọhụụ kọmputa.
Amamịghe echiche bụ akụkụ ọzọ nke na-elegharaghị anya na ikike ọhụụ dị elu, nke megidere: ọ ka mma. Snapdragon 865 biara na nke ise nke Qualcomm AI, okpukpu abụọ dị ike dị ka onye bu ya ụzọ, na-enye ntinye nke arụmọrụ puku ijeri 15 kwa nkeji, 3 MB nke nchekwa usoro yana nkwado maka LPDDR4 (2.133 MHz) na LPDDR5 (2.750 MHz). Igwe ọhụrụ AI a dị elu karịa onye bu ya ụzọ, na ike na nso, site na 35%, nke na-ekwu ọtụtụ. Ya mere, nhazi nke foto, n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ga-aka mma nke ukwuu, yabụ ịbụ nke ziri ezi karịa mgbe ị na-ewepụta ụdị eserese nke ihe maka nkenke ziri ezi ma ka mma (anyị ga-ahụ etu nke a si arụkwa n'ọnọdụ siri ike) .
N'aka nke ọzọ, a na-emelite SDK nhazi usoro, nke yana ọrụ nke akụrụngwa dịka AI Model Enhancer na Hexagon NN Direct na-enye ndị mmepe nnukwu nnwere onwe na mgbanwe iji mepụta ngwa ngwa ma mezue ngwa (n'ihe metụtara AI).
Banyere Bluetooth, Teknụzụ Qualcomm aptXTM Voice na-eme ka ọdịyo dịwanye nghọta karịa, ntakịrị adịghị adị, yana njikọta ekweisi ekwe ntị ka mma, niile na-elekọta oriri ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Edeelarị Snapdragon 865: gịnị ka ọ ga-enye?
Ihe mbụ Google Pixels na-enweta mmelite ngwanrọ kachasị ọhụrụ
Motorola One Hyper gosipụtara na foto tupu ịmalite